यी सेलिब्रिटीहरुसँगको प्रेम सम्बन्धका कारण पनि चर्चामा थिइन् बिपासा बासु
एजेन्सी–बलिउडकी एक चर्चित अभिनेत्री हुन् बिपासा बासु । पछिल्लो समय करन ग्रोवरसँग विवाह गरेर सेटल भएकी बिपासा कुनै समय लब अफयेरका कारण निकै चर्चामा आउने गर्थिन् ।
उनको जीवनमा आएका ४ जा बोइफ्रेण्डहरुमध्ये सबैभन्दा लामो लब अफयेर भने जोन अब्रहामसँग चल्यो ।
यी हुन् बिपासका पुर्व प्रेमीहरु
१. डिनो मोरिनो
डिनो र बिपासको लब अफयेर दुई वर्षसम्म चल्यो । आफुभन्दा दुईवर्ष जेठो डिनोसँग उनले धेरै फिल्ममा पनि काम गरिन् । उनीहरुद्वारा अभिनीत फिल्म राज सुपरहिट रहेको थियो ।
जोन र बिपासाको लब अफयेर ६ वर्षसम्म चल्यो । तर, विवाह गर्ने सोचमा रहेको यो जोडीले एक्कासी ब्रेकअप गरेको थियो । जोनले पनि अरेन्ज म्यारिज गरे । विवाहपछि उनीहरुको रियलमा ब्रेकअप भएको पुष्टि भएको थियो ।
३. क्रिस्टियानो रोनाल्डो र बिपासा बासु
पोर्चुगी स्टार र बिपासाको लबस्टोरीले पनि केही समय बलिउडमा ठुलै चर्चा पाएको थियो । बिपासाले एउटा पार्टीमा रोनाल्डोलाई किस गरिदिएकी थिइन् जसको तस्बिर इन्टरनेटमा भाइरल भएको थियो ।
४. हर्मन बबेजा र बिपासा
हर्मन र बिपासाको पनि केही वर्ष लब अफयेर चल्यो । तर, फिल्ममा असफल रहेका हर्मनसँग बिपासको ज्यादा रोमान्स टिकेन । त्यसपछि उनले आफ्नो बैवाहिक जीवनलाई ध्यानमा राखिन् । उनले करण ग्रोवरसँग विवाह गरिन् । करण बिपासाभन्दा ४ वर्षले कान्छा छन् ।